Eyona nto iphambili iphindwe kabini yokufaka ikroud lift L5800 (B) uMvelisi kunye neFektri | IsiTonghe
Ukuthunyelwa okuphindwe kabini kokuphakanyiswa kokujikeleza, iyunithi ephambili iphantsi komhlaba. Emva kokuba isithuthi siphakamisiwe, amazantsi, ajikeleze kunye nezithuba eziphezulu zivulekile ngokupheleleyo ngaphandle kokuphazamiseka kunye nokuphazamiseka. Ukudlula kwabasebenzi phakathi kwezixhobo ezininzi kulungile, umsebenzi wolondolozo ukhuselekile, ulungile kwaye usebenza kakuhle, kwaye indawo yokusebenzela icocekile kwaye isemgangathweni.
Kukho iindidi ngeendidi zeengalo zenkxaso zeLUXMAIN inground lift, ezinje ngokujikeleza uhlobo lweteleskopu, uhlobo lwebhulorho, kunye nokuxhotyiswa ngelori yesibini yokuphakamisa. Ingalo yenkxaso inokumiswa emhlabeni okanye itshone emhlabeni ukulungelelanisa iimeko ezahlukeneyo kunye neemfuno zokusebenzisa.
Emva kweminyaka yophuhliso, i-LUXMAIN ephindwe kabini yokuphakanyiswa kokujikeleza ibambe umgca wemveliso etyebileyo, egubungela iintlobo ezahlukeneyo zokuthwala umthwalo (3500kg-5000kg), iintlobo ngeentlobo zezithuba (1360mm-2350mm), iindidi ezahlukeneyo zengalo yenkxaso (ejikelezayo uhlobo lwe-telescopic, uhlobo lwebhulorho), olulungele ngakumbi iivenkile zokulungisa kunye ne-DIY inokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zolondolozo (i-injini, ibhokisi yebhokisi, i-chassis, umzimba).
Ilungele ukugcinwa kwemoto, ukuvavanywa kokusebenza kweemoto, i-DIY.
Umatshini wonke usebenzisa inkqubo yolawulo, i-hydraulic drive egcweleyo, iyunithi ephambili kunye nengalo exhasayo zitshone ngokupheleleyo emhlabeni, umhlaba ugqunywe ngesigqubuthelo esizenzekelayo, kwaye umhlaba ukwinqanaba.
Ikhabhathi yolawulo lombane isemhlabeni kwaye inokubekwa ngokuguqukayo ngokweemfuno. Ikhabhathi yolawulo yenzelwe iqhosha lokumisa likaxakeka, elisetyenziselwa ukumisa okungxamisekileyo. Isitshixo samandla esiphambili sixhotyiswe ngesitshixo kwaye silawulwa ngokukodwa ngumntu ozinikeleyo ukuqinisekisa ukhuseleko lomsebenzi.
Isiciko seflip yengalo yenkxaso yipleyiti yesinyithi ye-3mm kunye nesakhelo setyhubhu yesakhelo esineempawu zokulayisha, kwaye imoto inokudlula ngokwesiqhelo ivela ngasentla.
Zombini indlela yokuvula oomatshini kunye neendlela zokujika ezikhuselekileyo ziqhutywa ngombane, ezinokuthenjwa ngezenzo kwaye zikhuselekile ukusetyenziswa.
Isixhobo sokujija ngesanti kubunzulu baphantsi, ngaphakathi kwesisindo sokuphakamisa ubuninzi esibekwe sisixhobo, asiqinisekisi kuphela isantya sonyuko esikhawulezayo, kodwa ikwaqinisekisa ukuba ilifti iyehla kancinci kwimeko yokungaphumeleli kokutshixa koomatshini, ukuqhuma kombhobho weoyile kunye nezinye iimeko ezigwenxa ukunqanda ngokukhawuleza isantya. Ukuwa kubangele ingozi yokhuseleko.
Inkqubo yokusebenza kwezixhobo zezi zilandelayo
Cinezela iqhosha elithi "Ready" ukugqibezela la malungiselelo: i-flip cover ivula ngokuzenzekelayo - ingalo yenkxaso inyukela kwindawo ekhuselekileyo- iflip cover iyavala - ingalo yenkxaso iyehla iqweqwe ulinde isithuthi ukuba singene.
Qhuba isithuthi ukuba silungiswe kwisikhululo sokunyusa, lungisa indawo ehambelana nayo yengalo exhasayo kunye nendawo yokuphakamisa isithuthi, kwaye ucofe iqhosha u "drop lock" ukutshixa. Cinezela iqhosha "phezulu" ukuphakamisa isithuthi kubude obumiselweyo kwaye uqalise umsebenzi wokugcina.
Emva kokuba ulondolozo lugqityiwe, cofa iqhosha "ezantsi", isithuthi siyokuma emhlabeni, iingalo zenkxaso ziya kwandiswa ngesandla ukugcina iingalo ezimbini zenkxaso zihambelana kwicala langaphambili nangasemva lesithuthi, kwaye isithuthi siza kuhamba isikhululo sokunyusa.
Cinezela iqhosha elithi "setha kwakhona" ukuze ugqibezele le misebenzi ilandelayo xa useta kwakhona: ilifti iphakanyiselwe kwindawo ekhuselekileyo-isiciko seflip siyavulwa-ingalo yehlisiwe kumatshini wokuvala isiciko-iflip evaliweyo.
Ubukhulu. Ukuphakamisa ubude 1750mm
Umthamo wetanki yeoyile 16L
Egqithileyo Iposti ephindwe kabini yokunyusa ingroud L4800 (E) ixhotyiswe ngengalo yohlobo lwebridge
Okulandelayo: Iposti ephindwe kabini yokunyusa i-L6800 (A) enokusetyenziselwa ulungelelwaniso lwamavili amane
Isilinda esibambeleyo esinye, Isiphatho seHydraulic Scissor seMoto, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa okungaphakathi, Iselfowni ePost Post yokuPhakamisa imoto, Ukuphakanyiswa kweMoto eNye ePhathekayo, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa phantsi komhlaba,